Mba anọ na-ahazi "Osimiri Highway" na Galapagos Islands
Location: Mbido » Ịdee » Kwado » Mba anọ na-ahazi "Osimiri Highway" na Galapagos Islands
Mbinye aka n'akwụkwọ nkwado nke iwu ahụ mere na agwaetiti Galapagos, na ọnụnọ Ivan Duque, Onye isi ala Colombia, na ndị Minista mba ọzọ nke Panama na Costa Rica. Onye bụbu onye isi ala United States, Bill Clinton, gbara akaebe nbinye aka a.
Na Fraịde gara aga, Onye isi ala Ecuadorian Guillermo Lasso bịanyere aka n'akwụkwọ iwu iji mepụta Galapagos Marine Reserve ọhụrụ, nke akpọrọ Hermandad ma ọ bụ “Ụmụnna.” Ebe nchekwa ahụ na-agbasa mkpokọta oke mmiri echekwara na agwaetiti site na 45%, site na 133,000 km.2 (kilomita 51,351) ruo 193,000 km2 (kilomita 74,517, okpukpu abụọ na ọkara karịa steeti Maryland).
Ntinye aka emume nke iwu a mere na Agwaetiti Galapagos, na ọnụnọ nke Ivan Duque, Onye isi ala Colombia, na ndị ozi mba ọzọ nke Panama na Costa Rica. Onye bụbu onye isi ala United States, Bill Clinton, gbara akaebe nbinye aka a. Ndị isi ndị ọzọ dị iche iche sitere na US na Ecuador, yana ụlọ ọrụ Galapagos bụ isi, nọkwa ebe ahụ, gụnyere onye ama ama na-ahụ maka ihe gbasara mmiri na onye na-ahụ maka nchekwa Dọkịta Sylvia Earle.
"E nwere ebe ndị mere akara na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ ma taa anyị nwere nsọpụrụ nke ịnọ n'otu n'ime ebe ndị ahụ. Àgwàetiti ndị a na-anabata anyị akụziworo anyị ọtụtụ ihe banyere onwe anyị. Yabụ, kama ime ihe dị ka ndị nwe ala na oke osimiri ndị a, ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ime ihe dị ka ndị na-echebe ha?” Onye isi ala Lasso kwuru.
Ọ bụghị ihe ndabara, ebe nchekwa ọhụrụ ahụ gbatịpụrụ ruo n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, ebe ebumnobi ya bụ imepụta njikọ "ụzọ oké osimiri" Costa RicaAgwaetiti Cocos - ụzọ njem njem nke ọtụtụ nde nduru, whales, shark na ụzarị na-eji - si otú a na-esonyere saịtị UNESCO World Heritage Site.
N'ịgbaso nkwupụta ha na COP26 na Glasgow na ngwụcha afọ gara aga, Ecuador, Colombia, Panama na Costa Rica Ha niile agbaala mbọ ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta nnukwu ụzọ ụgbọ mmiri Eastern Tropical Pacific n'etiti obodo ha.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na iwu a bịanyere aka na Fraịde na-echekwa ahụmahụ anụ ọhịa na-akwado ndụ ndị ọbịa nwere ekele maka na Agwaetiti Galapagos. Ha ga-anụ ụtọ ma hụkwa otu ihe ahụ ha na-ezute n'oké osimiri - ma ọ bụ site na nyocha nke osimiri na ụgbọ mmiri, kayaks, bọọdụ kwụ ọtọ ma ọ bụ ụgbọ mmiri dị n'okpuru, snorkeling ma ọ bụ mmiri mmiri SCUBA - ruo ọtụtụ iri afọ na-abịa.
Ọzọ na: Costa Rica | UNESCO | United States | Panama | Glasgow
Ahịa ngwaahịa ọgwụgwọ okpomọkụ mpaghara na-atụ anya na ọ ga-eto CAGR nke 6.0% karịa amụma 2022-2030 United States|
EU machibido ndị Russia ka ha zụta ezigbo ala na Europe